ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခြင်း - ၁ (Saying Thank You - 1) - Myanmar Network
ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခြင်း - ၁ (Saying Thank You - 1)
Posted by Language Republic on October 4, 2012 at 10:49 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခြင်း - ၁
Many thanks for helping with the conference. I’m very sorry that so few people came on Saturday - let’s not organize the final session in the middle ofapublic holiday next year.
Anyway, let’s hope we have better luck in Yokohama.
အစည်းအဝေးအတွက် အကူအညီပေးခဲ့တာကို အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စနေနေ့တုန်းက လူနည်းနည်းလေးပဲ လာတဲ့အတွက်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ နောက်နှစ်ကျရင်တော့ အစည်းအဝေး နောက်ဆုံးအကြိမ်ကို အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်မှာ မစီစဉ်ဘဲ နေကြရအောင်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ယိုကိုဟာမားမှာတော့ ပိုကံကောင်းဖို့ မျှော်လင့်ကြရအောင်လား။
ရင်းနှီးသောကျေးဇူးတင်စကား ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါ တို့ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- Once again, many thanks. (နောက်ထပ် အများကြီးကျေးဇူးပဲ)
- Very many thanks. (ကျေးဇူးအများကြီးအများကြီးတင်ပါတယ်။)
Anyway (ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို) မိမိ အခုလေးတင်ပြောလိုက်သော အကြောင်းအရာက ပြောင်းပြီး အခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို ပြောချင်တဲ့အခါ အသုံးပြုပါသည်။ ဥပမာ -
- Anyway, I don’t want to think about it any more. (ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် နောက်ထပ်မစဉ်းစားချင်တော့ဘူး)
- Anyway, that’s all I wanted to say. (ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်တော် ပြောချင်တာ အဲတာအကုန်ပဲ။)
အထက်ပါအသုံးအနှုန်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေများနှင့် စကားပြောသောအခါ၌သာ အသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။ ပိုမို၍ ရုံးလုပ်ငန်းသဘောဆန်သော အဆက်အသွယ်များနှင့်ပြောသောအခါ ၄င်းအသုံးအနှုန်းကိုသော်လည်းကောင်း၊ Be good (ကောင်းကောင်းနေနော်)၊ Have fun! (ပျော်ရွှင်ပါစေ) Lucky you (ဖိုးကံကောင်း) အစရှိသော အသုံးအနှုန်းတို့ကိုသော်လည်းကောင်း အသုံးမပြုသင့်ပါ။
အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်တွေကို UK မှာတော့ Bank Holidays ဘဏ်ပိတ်ရက်များလို့ ခေါ်ပြီး US မှာတော့ Legal/Natinal/Public Holidays တရားဝင်/အမျိုးသား/အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များလို့ခေါ်ပါတယ်။
"သဘောပေါက်သည်" ကို ဗြိတိသျှလို (British English) Realise လို့ပေါင်းပြီး အမေရိကန်လို (American English) ကိုတော့ Realize လို့ပေါင်းပါသည်။ ထို့နည်းတူ တောင်းပန်သည် ကိုလည်း ဗြိတိသျှလို Apologise လို့ပေါင်းပြီး အမေရိကန်လိုကိုတော့ Apologizeလို့ပေါင်းပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခြင်း - ၂ (Saying Thank You - 2)
Permalink Reply by ayemoh on October 4, 2012 at 12:56
Permalink Reply by Aung Myo thant on October 4, 2012 at 13:59
Permalink Reply by Done Done on October 4, 2012 at 14:53
very many thanks for your lesson.
Permalink Reply by DawnyiT on October 4, 2012 at 15:11
Permalink Reply by ZIN MAR TUN on October 4, 2012 at 15:19
Permalink Reply by Swe Swe M on October 4, 2012 at 16:28
Permalink Reply by Hnin Thida Oo on October 4, 2012 at 16:47
Permalink Reply by 00rpg31g02svz on October 4, 2012 at 17:28
thanks for your sharing knowledge!
Permalink Reply by thant zin tun on October 4, 2012 at 18:38
Thanks for your post.If you don't mind, can you post for me international phonetics alphabets lesson?Thanks
Permalink Reply by tinmaraye on October 4, 2012 at 19:12
Permalink Reply by 0qk8irwkf6s2k on October 4, 2012 at 19:54
Permalink Reply by kawblut on October 4, 2012 at 20:06